दर्शन शास्त्र Archives - Lokpati.com
Tag - दर्शन शास्त्र
अंग्रेजी भाषाको Philosophy शब्द ग्रीस भाषाको Phellio र Sophia बाट आएको मानिन्छ। जसको अर्थ हुन्छ (अनुराग वा प्रेम) र (ज्ञान) हुन्छ। यसलाई एउटै वाक्यमा भन्दा ज्ञान प्राप्तिको अनुराग भन्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई सत्यको खोजी पनि भनिन्छ । त्यसैगरी...
आदर्शवाद के हो, यस दर्शनका जन्मदाता को–को हुन् ?
आदर्शवाद अङ्ग्रेजी भाषाको आइडिया शब्दबाट बनेको हो। यसको अर्थ विचार हुन्छ। आदर्शवादले राज्यलाई एउटा नैतिक संस्था मान्दछ। राज्यको आज्ञाको पालन गर्नु व्यक्तिको कर्तव्य मानिन्छ। धर्म र नैतिकता व्यक्तिका अध्यात्मिक तत्व...
दर्शन के हो, दर्शन कहाँबाट जन्मिन्छ ?
१) दर्शनको परिभाषा – दर्शन जीवन र जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण हो, प्रकृति र मानव समाजको भित्री आँखा हो। यही आँखाले हरेक वस्तुलाई हेर्ने, जाँच्ने, बुझ्ने र सोहीअनुरुप आफ्नो धारणा र जीवन व्यवहार निर्धारण...
मनहरि तिमिल्सिना/काठमाडौं। दर्शन संस्कृत भाषाको दृश् धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ, हेर्नु र बुझ्नु। दर्शनशास्त्र ग्रीक भाषाको (Phellio) फेलियो र (Sophia) सोफिया शब्दबाट बनेको हो। Phellio को अर्थ अनुराग वा प्रेम र Sophia को अर्थ ज्ञान भन्ने...